I-MAC - umkhiqizo wezimonyo zokwaziswa, ongathandwa kuphela ngabaculi bezimonyo, kodwa amantombazane avamile abakhathalela ubuhle bawo. I-Powder Blush - eyomile omile, evezwe ngama-shades angu-40. Baxubana ngokuphelele, basebenziselwa futhi bavuliwe, bevumela ukudala umdwebo omuhle we-cheekbones. Abanye abaculi abazenzelayo basebenzisanga nje kuphela ukunikeza lo muntu ukuhlunga kwemvelo nokukhanya, kodwa futhi ukukhipha. I-MAC Harmony Powder Blush ibe yinto ethandwa kakhulu emantombazaneni njengethuluzi elihle lokudala izimpawu ezidingekayo ebusweni.
Iyini i-Powder Blush?
Lona ukupakisha okujwayelekile okujwayelekile kwe- MAC cosmetics blush , efika ezinhlobonhlobo ze-shades. Kugcizelelwe ukuthi badalwe abaculi bokuzenzela. Iphalethi yombala ikuvumela ukuba ukhethe okukhethwa kukho okufaneleko ngombala othize kanye nesenzakalo. Ngaphezu kwalokho, bahlangana kalula kalula. I-Blush isetshenziswa ngendlela efanele futhi ifakwe emgqeni odingekayo wombala. Ifomula izinzile: i-makeup ihlala efomini layo langempela lonke usuku.
Ukuvumelana - kumele kube nakho konke okuhle
Emva komculi we-makeup u-Elena Krygina wanezela ohlwini lwakhe oluphezulu U-Blush Powder Blush hue Harmony, waqala i-hyper amazing kulo mkhiqizo wezithokozi. Ezimakethe ze-MAC, wathengwa ngobuningi obukhulu. Yini eyathonya ukuqashelwa okuthandwayo, ingabe ngempela amazwi omculi othandwayo owenzayo? Eqinisweni, ukwethenjwa komkhiqizo wezobuchwepheshe kanye ne-MAC kwenziwe umsebenzi walo. Uma omunye umuntu engabaza ukuthi kufanelekile ukuthenga i-MAC Powder Blush Harmony enhle, manje akekho.
I-Inthanethi igcwele ubufakazi, izithombe kanye nemibiko yevidiyo, lapho amantombazane, athokoza ngokuthenga, akhombisa ubuhle bokwehla. Ngokusho kuka-Elena Krygina, lokhu akuyona nje inhlamba, kodwa futhi umdwebo omuhle wombuso, ofanele cishe noma iyiphi intombazane. Ngenxa yomthunzi wayo we-beige wemvelo, usetshenziswe ngokuphelele kunoma iyiphi indawo. Kulula ukulawula ubukhulu bombala nomngcele. Konke lokhu kukuvumela ukuthi udale ukwakheka okuphelele futhi ungangabazi umphumela.
I-character harmoni character
I-MAC Harmony - umthunzi we-beige wemvelo ene-pink podtonom efudumele. Umbala ufana ne-cocoa enothuli. Ama-blush angama-microparticles, asetshenziselwa kahle ukushayela, bese esikhumbeni. Ukusetshenziswa akuncane, isikhungo sinomnotho futhi sizohlala isikhathi eside.
Uma kusetshenziswe ku- MAC Harmony "uthuli" oluthile, kodwa ukuqeda le ndawo kulula: nje shayela ngokweqile. Ngenxa yalokhu, ungathinta umkhawulo we-blush ngebhashi. Bese sebesebenza ngesibindi ebusweni. Kumele uqaphele ukuthi i-pigment ihanjiswa kalula esikhumbeni. Inani elincane lobumnyama lanele ukuhlobisa umugqa we-cheekbone noma enye indawo. Emva kokusebenzisa umthunzi kungenziwa ushintsho kalula: kulula ukuthunzi futhi ukufihla imingcele ecacile. Kulesi sixhumanisi, cishe akunakwenzeka ukuthi nabasebenzisi abangenalwazi bakwazi ukuya kude kakhulu nenombolo yabo.
Ubani ozosebenzisa umthunzi we-Harmony njenge-blush?
I-MAC Harmony imbala yemvelo, enganiki umphumela obomvu. Ama-artist artists akholelwa ukuthi umthunzi ungashintshwa kunoma yisiphi isikhumba: kokubili ukukhanya nokumnyama. Yiqiniso, inani le-blush kufanele lilungiswe. Ukuze ubuso bomthunzi obuhlaza, Ubunye obuhle kufanele busetshenziswe kahle kakhulu. Udinga ukuqoqa inani elincane le-pigment kanye nomthunzi ogcwele. Kungani kunjalo? Esikhumbeni esikhuphukile futhi esilahlekile, i-beige shades egcwele ibukeka ingalungile. Ukwenza okunjalo ngeke kwengeze ubuhle. Nge-shading ngokugcwele ye-pigment, umugqa wama-cheekbones uzobukeka unemvelo.
Abanikazi besikhumba esincibilikisiwe nabanamahloni bangasebenzisa umugqa onesibindi nesicacile. Ngokwebala labo, lokhu kungumthunzi ovamile obukeka njengowokuzalwa. Kumele kuqashelwe ukuthi ebusika, ukushisa okucacile nokushaya kufanele kugwenywe. Isikhumba ngalesi sikhathi sivame ukukhanya, futhi izimonyo zibukeka zimnyama futhi zibomvu. Ehlobo, izithunzi zobhedu ebusweni zibukeka sengathi zinemvelo futhi zinhle.
Indlela yokusebenzisa njengomdwebi?
Uma ukukhishwa kwe-MAC Harmony kuthengwa ngenhloso yokwazisa ubuso, kufanele kusetshenziswe kuphela ezindaweni ezithile. Ngaphandle kwekholi yeHarmony, uzodinga i-highlighter noma i-correcta ithoni yokukhanya, kanye nebhayisikili ehambelanayo. Ngokujwayelekile i-pigment emnyama (kithi, i-Harmony blush) isetshenziswa ku:
Ngaphambili ekugcineni kwezinwele ukukhula;
Ngemuva kwaloko, ubuhlungu buvuleke ngokusheshisa okuphazamisa ukunikeza imibono emisha ukubukeka kwemvelo. Ngesikhathi esifanayo, kuyadingeka futhi ubusheleleze imingcele phakathi kwezindawo eziqakathekile futhi ezimnyama.
Kumele kuqashelwe ukuthi ibhulashi lokudweba kufanele likhethwe nxazonke ngezingcingo eziphakathi. Ngaphandle kwalokho ungakhethi izandla zakho eziqondile: kunzima kakhulu ukusebenza nabo. Abaqalayo nabo bayothanda ukhetho lwamabhulashi ahlanganisiwe: alula ukufunda izinto eziyisisekelo, futhi ngokujwayelekile, kulula ukuyisebenzisa.
Ama-analog Blush we-Powder
Ukubuyekezwa kwe-MAC Harmony yezinhlobonhlobo kunomdlandla kangangokuthi cishe cishe zonke izintombi, kungakhathaliseki ubudala, zifuna ukuthenga ibhokisi elimnyama elifisa. Kodwa kukhona isithiyo esisodwa - intengo. Akekho ophikisana neqiniso lokuthi kulungile. Noma kunjalo, i-MAC - lena izimonyo zobuchwepheshe bekhwalithi ephakeme, okungukuthi, ngokusemthethweni, ayikwazi ukushibhile. Kodwa kuthiwani ngalabo abaphupha nge-MAC abaxosha futhi abakwazi ukuzithenga? Kuhlala kuphela ukufuna "osebenza nabo" abafanelekile. Cabanga izinguqulo zesabelomali ezithandwayo ze-MAC rouge:
I-NYX Powder Blush Umthunzi we-Taupe (kubiza esifundeni sama-ruble angu-500, esikhundleni se-1700 ku-MAC);
I-Revilon Powder Umthunzi obomvu we-Sandalwood Beige (kuphela ama-ruble angu-200 kuphela);
Enye i-analog ye-MAC Harmony - Umthunzi wokuphelela ongenakuqhathaniswa ne-Max Factor 245 Ama-Amber avela (ama-ruble angaba ngu-500).
Umthunzi we-Harmony Harmony kusuka ku-MAC kungaba nanoma yikuphi ukushaywa kwethembo efanele nokuthungwa. Kufanelekile ukunaka imikhiqizo yeziqhumiso, phakathi kwabo kukhona umncintiswano ofanelekayo ku-MAC.
I-MAC Harmony blush: ukubuyekezwa okuvela kubasebenzisi
Amantombazane amaningi alale futhi abone ukuthi athenge kanjani i-red MAC ethandekayo, okubonakala sengathi iyoxazululwa zonke izinkinga zokuzenza nsuku zonke. Umkhiqizo uhle kakhulu: usetshenziswe kahle futhi uvuliwe, usetshenziswe ngokwezomnotho, umthunzi we-Harmony ufanelwe kokubili njengenhlamba kanye nomdwebi. Ochwepheshe bahlonipha lo mdwebo obuhle futhi batusa ukuba amantombazane ayenziwe nsuku zonke nangokwenziwe kusihlwa. Yiqiniso, ikhwalithi yemikhiqizo yalo mkhiqizo ayinakuphikwa. Abamemezeli phakathi kwabasebenzisi abajwayelekile nabachwepheshe kangangokuthi kulula ukukholisa noma ubani ukuba enze okukhethayo ngokuya kwe-MAC.
Yiqiniso, abanye bakhetha amanye ama-brand noma abazange bayakwazise lo mkhiqizo nhlobo. Kodwa kuzo zonke izinzuzo nezinkinga ezingenzeka (okuphakathi kwazo, mhlawumbe, izindleko eziphakeme kuphela), umuntu kufanele enze isiphetho esisodwa kuphela: Ukuvumelana akuyona i-panacea, udinga ukusebenzisa ubuhlungu ngomqondo. Uma izimali zikhona, zithola ngesibindi, ngaphandle kokukhohlwa ukusebenzisa kahle kanye nomthunzi obumnyama. Uma kungenjalo, imakethe inikeza izinhlobo ezahlukene zezindlela ezizofaka esikhundleni se-MAC yangempela ngenketho eyengeziwe yebhajethi.
I-Aquapilling ngezinyawo: ukubuyekezwa kwamakhasimende
Niche amakha - a ... niche kwamakha: kuzibuyekezo, izintengo, izithombe
Ummeli waseBegonia Bright wezitshalo ze-Ornamental
ASIT yokwelapha - kuyini? Isimiso ezisebenza kohlelo, imiphumela emibi, ukubuyekezwa
Indlela ukunciphisa umzimba esiswini namathanga - umbuzo ngokuqinisekile ezithakazelisayo ...